Kunakidzwa | RayHaber
mushaRailwayKENTİÇİ Rail SystemsFunicular
Kufambisa pachena kwevanhu paruzhinji muIstanbul pazuva reRepublic
Kufambisa pachena kwevanhu paruzhinji muIstanbul pazuva reRepublic. 29 Gumiguru Republic Zuva re96. IMM yakagadzirira kupemberera gore nemhemberero dzine mbiri, zvifambiso zveruzhinji pazororo rino renyika vakasarudza kupa mabasa epachena. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality yakabata Rail Systems Workhop umo kwakatora chikamu chakawanda kubva kuvadzidzi kusvika kune vamiriri vemapato. Musangano uyu wakanangana nebasa rakaitwa kusvika parizvino muzvitima muIstanbul uye nhanho dzinofanirwa kuzotorwa mushure. [More ...]
Yakaderedzwa Istanbulkart yeVadzidzi Vasingakwanise Kukunda University
Kukura kwekutapurwa kwekutakura kwakatanga nekutanga kwe İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu yakawedzerwa. IMM Kanzuru yakafunga kuti vadzidzi vasingagone kugara mudhipatimendi muyunivhesiti bvunzo uye vadzidzisi vanoshanda vari muchibvumirano mu Ministry of Education vabatsirwe nekapepuru yebhuruu kadhi. [More ...]
Zvikoro zvakavhurwa muIstanbul, Hapana Njodzi Yekutambudzika
MuIstanbul, pedyo nevadzidzi ve3 mamirioni uye vadzidzisi vangangosvika chiuru che200 vakaita kutanga kwemakirasi nhasi. Muguta mune zvifambiso zvevoruzhinji zvisina mubhadharo, mota dzebasa dzinopihwa kutakura vabereki. Zvizvarwa zvemunyika, İBB Mutungamiri Ekrem amomamoğlu'nun [More ...]
9 Gunyana Muvhuro Veruzhinji Vokufambisa Vachave Vemahara muIstanbul
9, iyo inovhura zvikoro, ichapa mabasa epachena ekufambisa muIstanbul musi waGunyana Muvhuro pakati pe06: 00 - 14: maawa e00. 2019-2020 gore rechikoro 9 Gunyana 2019 rinotanga Muvhuro. 16 mamirioni [More ...]
IMM Inokurudzira Ruzhinji Kufambisa Kupesana NeChikoro traffic
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) 2019-2020 Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vachitsanangura matanho anotorwa kwegore redzidzo, zvifambiso zveveruzhinji zvinopa basa remahara uye mota dzebasa dzinotakura vabereki vanoda zuva rekutanga, akadaro. kuti vagari [More ...]
Istanbul Traic Yakagadzirira Mwaka Idzva Yefundo
9, uko kwegore idzva redzidzo ichatanga muIstanbul, yakatorwa kuitira kudzivirira matambudziko emumigwagwa neMuvhuro. IMM, Dziviriro uye Gendarmerie ichashanda pamwe kuti ive nechokwadi chekufamba kwemotokari. 06: 00-14: Bulk pakati pe 00 maawa [More ...]
Kufambisa Kweruzhinji muIstanbul 30 Yemahara munaAugust
Mhemberero dze30 Nyamavhuvhu Yekukunda Kubata, motokari dzeveruzhinji muIstanbul dzinotakura vatyairi mahara. Zvinoenderana neIstanbul Metropolitan Municipality (IMM), kukunda kukuru kwe97. munzvimbo zhinji dzeguta kupemberera [More ...]
Vagari veIstanbul vanoda IETT neMetro kushanda 24
Iko kusakwana kwemitsetse yebhazi yakagovaniswa neIETT ichiti 24 ichashanda kwemaawa akawanda uye chokwadi chekuti mazhinji acho ndeaya emuchadenga anounganidza zviitiko. Kunyangwe Megakent Istanbul iguta rinogara usiku, zvifambiso zvevoruzhinji zvinowanikwa manheru. [More ...]
Is Bayramda Bus, Metro, Marmaray Yemahara muIstanbul? Eid al-Adha Is 2019 Veruzhinji Yekutakura Yemahara?
Sarudzo yakatorwa neIstanbul Metropolitan Municipality Council pamwe nechikumbiro chaMutungamiri Ekrem İmamoğlu ichapa mabasa epachena ekufambisa muIstanbul pazuva reVictory Day ne30 Nyamavhuvhu Yekukunda. IETT, vagari vanowanikwa nyore kunzvimbo dzekuurawa dzeIMM [More ...]
30 Veruzhinji Yekufambisa muIstanbul muna Nyamavhuvhu uye Eid al-Adha Mahara
Istanbul Metropolitan Municipality, iyo Eid al-Adha, 30 Nyamavhuvhu Yekukunda uye zvikoro zvichavhurwa neMuvhuro munaGunyana 9 zvifambiso zvevanhu vese muIstanbul vakasarudza kupa mahara. Istanbul Metropolitan Municipality Assembly, IMM [More ...]
Kana iyo 221,7 kilometre njanji iri kuvakwa muIstanbul, kureba kwechitima muguta kunosvika 233,05 kilometres neiyo iripo 454,75 kilomita. Kukosha kwechitima njanji kuderedza kushomeka kwemagetsi kweIstanbul [More ...]
New Mutemo pane Urban Rail Systems Achamanikidza Mataundi
Zvichakadaro kudzokororwa kwekurasikirwa kweAKP kwemazhinji matuta makuru kuchiri kuenderera, hurumende inotonga yaita hurongwa hune chekuita nemaguta. Neyemutemo mutsva, kunyanya mataurmoguta matagi haagone kuita bhizinesi zvakapotsa [More ...]
Pamusana pehutano hwakasayirwa pakati peUnited Health uye Istanbul Metropolitan Municipality, "Vakagumbuka" uye "Vakabatana Vakabatana" Istanbulcards inofanira kunyorwa muUnited Health system musati yaita visa. Pakati peUtano Hwehutano uye Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]